Chow Yun-Fat – Cast – M-Sub Movie – Myanmar Subtitle Movies & Series Free Download Website
Project Gutenberg (2018) Unicode 2018 ထဲမှာ ထွက်ရှိထားပြီးတော့နိုင်ငံတကာရုပ်ရှင်စံနှုန်းသက်မှတ်ချက် IMDb Rate 7.3 ရရှိထားတဲ့ Project Gutenberg ဇာတ်ကား ပဲဖြစ်ပါတယ် Cast တွေကလည်း နာမည်ကြီးသရုပ်ဆောင်တွေပါ..ဇာတ်လမ်းအကျဉ်းလေးကတော့ လွန်ခဲ့တဲ့ နှစ်တွေက ချစ်သူ ၂ယောက် …အတူပန်းချီဆွဲကြတယ်..ကောင်မလေး က လက်ရာမှာပါရမီပါတယ် ကောင်လေးကတော့ သူ့လောက်ပါရမီမထူးပေမယ့်ပုံတူဆွဲနေတဲ့နေရာမှာလည်း သူက ပါရမီပါတယ်ကံကြမ္မာလှည့်ကွက်တွေကြောင့်၂ယောက်သားဝေးပြီးတော့ ပြန်လည်ဆုံတွေ့တဲ့အခါမှာတော့ကောင်လေးက လူသတ်တရားခံအဖြစ်အဖမ်းခံထားရတယ်ကောင်မလေးကတော့ နိုင်ငံတကာအသိအမှတ်ပြုပန်းချီပညာရှင်တစ်ယောက်…. ရဲစခန်းကဟွကျားလို့ခေါ်တဲ့လူတစ်ယောက် အကြောင်းကိုကောင်လေးကိုမေးတယ်..ကောင်မလေးပါတော့မှပဲကောင်လေးက ဟွကျားအကြောင်းကိုဖွင့်ပြောတော့တယ်ကောင်မလေးနဲ့ဝေးပြီးတဲ့နောက် ကောင်လေးဟာဟွကျားဦးဆောင်တဲ့ ငွေတုဂိုဏ်းတခုကိုရောက်သွားတာကနေအစပြုပြီး မြုပ်ကွက်များစွာပါဝင်တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးတပုဒ်ဖြစ်တည်လာပါတော့တယ်ထိုင်ရာကမထချင်ပဲ အဆုံးထိ စိတ်ဝင်စားပြီးစောင့်ကြည့်သွားရမယ့် ဇာတ်ကားမျိုးဖြစ်လို့ရုပ်ရှင်ချစ်သူတွေ လက်မလွှတ်သင့်တဲ့ဇာတ်ကားဖြစ်ပါတယ် Credit Review Zawgyi 2018 ထဲမွာ ထြက္ရွိထားၿပီးေတာ့ႏိုင္ငံတကာ႐ုပ္ရွင္စံႏႈန္းသက္မွတ္ခ်က္ IMDb Rate 7.3 ရရွိထားတဲ့ Project Gutenberg ဇာတ္ကား ပဲျဖစ္ပါတယ္ Cast ေတြကလည္း နာမည္ႀကီးသ႐ုပ္ေဆာင္ေတြပါ..ဇာတ္လမ္းအက်ဥ္းေလးကေတာ့ လြန္ခဲ့တဲ့ ႏွစ္ေတြက ခ်စ္သူ ၂ေယာက္ …အတူပန္းခ်ီဆြဲၾကတယ္..ေကာင္မေလး က လက္ရာမွာပါရမီပါတယ္ ေကာင္ေလးကေတာ့ သူ႔ေလာက္ပါရမီမထူးေပမယ့္ပုံတူဆြဲေနတဲ့ေနရာမွာလည္း သူက ပါရမီပါတယ္ကံၾကမၼာလွည့္ကြက္ေတြေၾကာင့္၂ေယာက္သားေဝးၿပီးေတာ့ ျပန္လည္ဆုံေတြ႕တဲ့အခါမွာေတာ့ေကာင္ေလးက လူသတ္တရားခံအျဖစ္အဖမ္းခံထားရတယ္ေကာင္မေလးကေတာ့ ႏိုင္ငံတကာအသိအမွတ္ျပဳပန္းခ်ီပညာရွင္တစ္ေယာက္…. ရဲစခန္းကဟြက်ားလို႔ေခၚတဲ့လူတစ္ေယာက္ အေၾကာင္းကိုေကာင္ေလးကိုေမးတယ္..ေကာင္မေလးပါေတာ့မွပဲေကာင္ေလးက ဟြက်ားအေၾကာင္းကိုဖြင့္ေျပာေတာ့တယ္ေကာင္မေလးနဲ႔ေဝးၿပီးတဲ့ေနာက္ ေကာင္ေလးဟာဟြက်ားဦးေဆာင္တဲ့ ေငြတုဂိုဏ္းတခုကိုေရာက္သြားတာကေနအစျပဳၿပီး ျမဳပ္ကြက္မ်ားစြာပါဝင္တဲ့ ဇာတ္လမ္းေလးတပုဒ္ျဖစ္တည္လာပါေတာ့တယ္ထိုင္ရာကမထခ်င္ပဲ အဆုံးထိ ...